Bhati rinotaridzika semutambi Lance Bass muGreater Mekong Dunhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Bhati rinotaridzika semutambi Lance Bass muGreater Mekong Dunhu
Kuputsa Kufamba Nhau • Laos Kuputsa Nhau • Myanmar Breaking Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chiremwaremwa chinoratidzika semuimbi / mutambi Lance Bass, gibhoni rakatumidzwa zita rekuti Luke Skywalker, uye chigunwe chinoratidzika kunge chakabva kuna Lord of the Rings "Middle Earth," ndedzimwe dzemhando itsva gumi neshanu dzakawanikwa mudunhu reGreater Mekong gore rapfuura, maererano neshumo nyowani kubva kuWorld Wildlife Fund.
Pamhuka nyowani nyowani dzakawanikwa, iyo Skywalker Hoolock Gibbon yakatanga kuoneka pakati pa2017 uye yakatumidzwa zita rekuti "Star Wars" hunhu, kune mutambi Mark Hamill. Nechekare zvakadaro, inyani yechimakumi maviri nenomwe iri panjodzi huru pasi rose uye yakatarisana ne "njodzi huru uye iri pedyo nekupona kwaro sezvinoita zvimwe zvipuka zvidiki zvidiki kumaodzanyemba kweChina neSoutheast Asia nekuda kwekurasikirwa kwenzvimbo nekuvhima," timu yakazviwana.
Mhuka nhatu, 23 hove, 14 amphibian, 26 zvinokambaira uye 91 mhando dzemiti dzakawanikwa muCambodia, Laos, Myanmar, Thailand neVietnam, mune dzimwe nzvimbo dzisingapindike dzedunhu, senge nzvimbo dziri kure dzemakomo uye dzakakomba masango, pamwe chete nzizi nehuswa.
Zvisinei, nyanzvi dzakayambira kuti mhando dzakawanda dzisati dzawanikwa dzicharasika nekuda kwekutemwa kwemasango, shanduko yemamiriro ekunze, kuuraya vanhu zvisiri pamutemo uye kutengeswa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo.
"Kune mamwe marudzi mazhinji kunze uko akamirira kuwanikwa uye zvinosuwisa, mazhinji akawanda acharasika izvi zvisati zvaitika," Stuart Chapman, WWF's Asia-Pacific Regional Director for Conservation Impact, vakadaro muchitaurwa. “Hazvifanirwe kunge zvakadai. Kuona kuti nzvimbo dzakachengetedzwa dzakakura dzinoitirwa mhuka dzesango, pamwe nekuedza kukuru kwekuvhara misika yekutengesa zvisiri pamutemo mhuka, zvichatora nguva yakareba kuchengetedza mhuka dzinoshamisa dzemunharaunda yeMekong. ”
Zvizhinji zvemhuka dzesango zvinotsanangurwa mushumo mutsva - Nyowani Mhando paBlock - yatove panjodzi yekurasikirwa nevanhu kana kutoparara.
Iyi fragility iri kubva kumishenjere, dzakasiyana-siyana dzine yakasarudzika girobhu-senge pachigadziko chayo, yakawanikwa muCambodia anonhuwirira maCardamom Mountains, ari panjodzi yekuchenesa, kune iyi nyowani hermia herb kubva kuLaos, yatove nenjodzi nekuti nzvimbo yayo yabhadharirwa kucherwa kwemarara.
Ipo Laos neMyanmar vaedza kudzikisira kushambadzira kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo, nekuwedzera zvirango uye kuvhara zvitoro nemisika, vanovhima zvisiri pamutemo vanogona kubata nekutakura mhuka kuyambuka miganhu, kunyanya munzvimbo dzakaita seMongla neTachilek muMyanmar, akadaro Lee Poston, mutauriri weWWF munzvimbo yeGreater Mekong.
Bhati rine vhudzi rine akafanana neLance Bass 'iconic mazaya echando echikwata * NSYNC, yakawanikwa munzvimbo yepasi peHimalaya musango reMyanmar reHkakabo Razi.
Poston akati misungo inogadzirwa kubva pamutengo wemabhasikoro wakachipa unowanzo shandiswa zvisina tsarukano nevanovhima zvisiri pamutemo, zvese kubata nyama yemusango yekudyiwa kwenzvimbo uye kutora mhuka dziri panjodzi senge ingwe uye ingwe dzekutengesa mhuka dzesango. Kunyangwe achirumbidza basa revatariri vemuno vanoteedzera nekuongorora nzvimbo dzemiteyo, huwandu hwakawanda hunoita kuti basa rekubvisa riome.
Kunyangwe paine matambudziko, Poston akati chirevo chitsva ichi "chiratidzo chesimba rekugadzikana kwezvinhu."
"Nekuratidzira izvi zvinoshamisa zvisingawanikwe nemazana evasayendisiti vepasirese, tiri kutumira meseji yekuti kunyangwe izvo kutyisidzira kuri kukuru kumhuka dzesango muGreater Mekong, kuchine tariro yeramangwana, nekuti zvisikwa zvitsva zvakawanda zvinoshamisa zviri kuwanikwa zvese inguva, ”akadaro.
Mukutaura, Chapman akati "kune ropa, ziya uye misodzi mushure mezvose zvitsva zvawanikwa. "Asi mujaho wakanangana nenguva yekuzivisa zvitsva kuti matanho atorwe ekuzvidzivirira nguva isati yapera."